Agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Maalgashiga Somaliland iyo Warshadaha oo kormeeray warshadaha wax-soosaarka dalka – WARSOOR
HARGEYSA – (WARSOOR) – Agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Maalgashiga iyo Warshadaha mudane Maxamed Cismaan Siciid ayaa saaka kormeer ku tagay qayb ka mida warshadaha wax-soosaarka ee ku yaala caasimada hargaysa.
Ujeedka kormeerkan ayaa ahaa mid uu kusoo kormeerayey agaasimaha guud uune ku ogaanayey xaaladooda wax-soosaar. Warshadaha kormeerka lagu marayey waxa ka mid ahaa Warshada Ranjiga ee Fortune iyo Warshada Furshaanta ee Karama.
Waxa kormeerka ku wehelinayey agaasimaha waaxda xidhiidhka dadweynaha iyo koox samaynayey xog ururin.
Wasaaradda Horumarinta Maalgashiga iyo Warshadaha